ओलीको प्रश्नः कू को अर्थ के हो ? संविधानअनुसार काम गर्दा कू हुन्छ ? – Hamro Suchana
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागि काँग्रेस र माओवादीले अर्काको दल फुटाउन खोजेको बताउनुभएको छ ।आइतवार राजधानीमा एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले पदको लागि एमाले र जसपा फुटाउने प्रयास भएको बताउनुभयो ।
दलीय ब्यबस्थामा एक दलको सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै यसको विरोध गर्न बुद्धिजिवीहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।‘बुद्धिजीविहरुलाई प्रश्न के हामीले यस्ता कुराहरुलाई बढावा दिने हो रु यस्ता अनूचित कुराहरुको विपक्षमा किन चुइक्क बोल्न सक्नुहुन्न रु यस्ता कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार हुन सक्दैन भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न रु’ उहाँले भन्नुभयो ।
दल छोड्ने, बनाउने अधिकार भएपनि त्यसको विधि हुने भन्दै उहाँले त्यही दलभित्र बसेर अनुशासन उल्लंघन गर्नु कदापी ठीक नहुने बताउनुभयो ।
आफूले भनेजस्तो भएन भने प्रतिगमन हुने, कू हुने भन्दै त्यसप्रति उहाँले उसन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । ‘कू को अर्थ के हो रु संविधानको काम गर्दा कू हुन्छ रु लोकतान्त्रिक काम गर्दा कू हुन्छ रु जब संसदको गणित उपयुक्त हुन सकेन र त्यो देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन,
देशको आवश्यकता र संसदको गणितमा ठूलो ग्याप भयो, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, त्यो कुरा आज पुष्टि भयो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पल्लो घरको नरे ओल्लो घर, ओल्लो घरको नरे पल्लो घर गरेको छ ।’
उहाँले आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री हटाउने काम परोपकारी काम हुन नसक्ने बताउनुभयो । बर्तमान प्रतिनिधिसभामा भएको गणित डिजेनेरेट अर्थात भद्रगोल भएको उहाँको दावी छ ।
उहाँले विपक्षीहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरेको कारण आफ्नो पनि मागदावी नपुगेको बताउनुभयो । आफू दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले २२१ र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महताको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिसामू गएको उहाँले बताउनुभयो ।
तर आफ्नो प्रयास असफल गराउन विपक्षी दलहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको उहाँको भनाई छ ।‘मैले पहिले भनेको थिएँ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भनेर, तर राजीनितमा अकस्मात फेरबदल हुने रहेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि तीन दिनको समय दिदा अरुले पनि पार लगाउन नसकेको भन्दै धारा ५ को सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभयो । आफूले यसअघि बैकल्पिक सरकार गठन गर्न कतै अवरोध नगरेको बताउनुभयो ।
समय छोटो भयो भन्ने विषयमा उहाँले समयमै निवेदन दिन राष्ट्रपतिकहाँ जान बर्षौँ देखि तयारी भएको देखिएको बताउनुभयो । ‘समय पर्याप्त रहेछ भन्ने कुरा त दावी प्रस्तुत गरेको देखेरै थाहापाइयो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
धेरै व्यक्तिले मोर्चा कसेर, बल पुर्याएर न्यायलयमा जान जरुरी नरहेको बताउनुभयो । एक जना गए पनि धेरै जना गए पनि न्याय पाइने भएकोले मोर्चा बनाएर अदालत जान नपरेको बताउनुभयो ।कानूनविद, बुद्धिजिवीहरुलाई राष्ट्रपतिविरुद्ध उजुरी नलाग्ने र निर्णयमा कुनै हेरफेर गर्न नसकिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
चुनावबाट पछि हट्न धेरैले थर्काए, रेकर्ड राखेको छुः खिमलाल देवकोटा
काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा सदस्य डा। खिमलाल देवकोटाले आफूलाई चुनावबाट पछि हट्न धेरैले फकाएको र कति जनाले त थर्काएको बताएका छन्। तर आफू अडिग रहेर विचलित नभएको उनले बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले आफूलाई थर्काउनेहरुको नाम समयक्रममा आवश्यकता परे सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। थर्काउनेहरु मध्ये केहीको त भ्वाइस रेकर्ड गरेर राखेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘व्यक्तिगत रुपमा मलाई चुनावबाट पछि हट्न धेरै जनाले फकाएरथर्काए । समयक्रममा आवश्यकता परेमा नाम भन्दै गरौँला। कसै कसैको त भ्वाइस रेकर्ड नै राखेको छु’, देवकोटाले भनेका छन्।
उनले धम्कीबाट विचलित नभएकै कारण आफूसहित धेरै वुद्धिजीवीहरुको ईज्जत र प्रतिष्ठा गुम्न नपाएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
‘विचलित भएको भए मेरो मात्र हैन म जस्ता स्वतन्त्र रुपमा कलम चलाउने वुद्धिजीवीहरुको ईज्जत प्रतिष्ठा जाने थियो । हामी कलंकित हुने थियौँ’, देवकोटाले भनेका छन्।
डा‍। देवकोटा गएको जेठ ६ गते भएको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई पराजित गरेर विजयी भएका थिए।
यो घटनाबाट लामो समयदेखि राजनीति गरिरहेका नेताहरुले पाठ सिके राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
‘केही नेताहरुले हामीजस्ताबाट केही सिक्दा राम्रै होला । बोलेपछि, सही गरेपछि, वचनवद्ध भएपछि पूरा गर्नुपर्दछ। भागेर, लुकेर, जालसाझी गरेर केही समय त टिकिएला। तर बुझ्न जरुरी के पनि छ भने हामी जस्ता युवाहरुले लामो यात्रा गर्न बाँकी नै छ।
निष्ठा र ईमान्दारिताको राजनीतिबाट भागेर नहिँडौँ। बोली र ईमानमा कटिवद्ध होऔँ’, देवकोटाको सन्देश छ।
Previous: देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदहरु सर्वोच्च जाने तयारीमा
Next: ओली शासनको अन्त्य नभई लोकतन्त्र बाँच्दैन